Met Gala Fashion ပွဲကြီးကို တက်ရောက်ခဲ့သော အနုပညာရှင်များ၏ ပုံရိပ်များ – FemaleWear.net
Met Gala Fashion ပွဲကြီးကို တက်ရောက်ခဲ့သော အနုပညာရှင်များ၏ ပုံရိပ်များ
၂၀၁၈ ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ဖက်ရှင်ညကြီးကို New York မှာရှိတဲ့ Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Hollywood ရဲ့ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေကတော့ သူထက်ငါသာတဲ့ fashion တွေနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် တက်ရောက်လာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Hollywood မှာတော့ သူများဒီဇိုင်းတွေကိုလည်း ကူးမချသလို ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ အဆန်းသစ်ဆုံးဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ ဝတ်ဆင်သူ အနုပညာရှင်များရဲ့ အလှကို ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ ဖက်ရှင်အားလုံးဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ Met Gala ရဲ့ အကြီးဆုံး fashion night မှာ သူ့ထက်ငါလှနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
I had the best time last night thanks to my angel @donatella_versace !!! & my whole @versace family, I am so proud to wear your work! ✨ @voguemagazine @metmuseum
A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on May 8, 2018 at 10:23am PDT
love you my friends @laurapolko @patrickta, creating with you isadream 🙂 ? #metgala
Thank you @thomasjhilfiger @tommyhilfiger for designing this beautiful dress for an amazing night at the Met Ball! #metgala2018 #love #family #tommyhilfiger
A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on May 8, 2018 at 5:58am PDT
#metgala @metmuseum #metgala2018
A post shared by Donatella Versace (@donatella_versace) on May 7, 2018 at 4:01pm PDT
Tags: Celebrity, Fashion Designer, Met Gala
Star Wars fan များအတွက် Star Wars Day
Taylor Swift ရဲ့ ”Delicate” Fringe Dress လေးတွေကို ဘယ်မှာဝယ်လို့ ရနိုင်မလဲ?